Abiy Ahmed oo ku dhawaaqay qorshe ka dhan ah Hogaamiyayaasha Tigray. - Axadle | Wararka Africa
Raysul Wasaaraha Dalka Itoobiya Abiy Axmed Cali ayaa ku dhawaaqay qorshe ka dhan ah ismaamulka Tigray, kadib markii uu dhamaaday waqtigii uu u qabtay in ay isu soo dhiibaan hogaamiyayaasha ismaamulkaas.
Abiy ayaa sheegay in saddex cishe uu fursad ahaan u siiyay hogaamiyayaasha Tigray, balse sooma bandhigin mas’uuliyiin ka faaiideysatay, marka la dhadhansado hadalkiisa xaalku waxa uu u muuqdaa in aysan dhaqangelin riyadiisa siyaasadeed.
Waxa uu ku hanjabay in uu ku dhaqaaqayo wajigii ugu dambeeyay ee howlgalka, mana faah-faahin sida uu noqonayo, inkasta oo loo badinayo in uu militariga ku xoojinayo colaadda muuqata.
Ismaamulka Tigray ayaa sheegay in ay iska caabbiyeen weeraro kala duwan oo dhanka Federaalka uga yimid, waxaana ay sheegeen in ay ka difaacdeen meelo muhiim u ah in uu sii daba dheeraado dagaalkooda.
Dowladda Federaalka Itoobiya ayaa sheegtay in ay dishay 550-askari oo dhanka Ismaamuka Tigray ah, halka dhankooda uu gaaray khasaare isugu jiro dhimasho, dhaawac & barakaca dad gaaraya 27,000, waxaana wali xanniban qoysas kale oo awoodi waayay in ay naftooda la baxsadaan.
Haddaba, Abiy Ahmed, maku guuleysan doonaa awood militari uu u adeegsado ismaamulka Tigray?